Sarin'ny faradoboka maherin'ny 50 | Hevitra MPANOHARIANA
Raha ny fahitako azy aloa dia vitsy noho ny t@ Alaroboa no tonga teny Antsonjobe.
Nampidirin'i Rasammy @ 18:10, 2007-12-08 [Valio]
o ry jentl a,
mba ataovy ngozangoza kosa ny sary sasany ranga fa tsy misy ankafizana azy tsara a :P
t@ firy ny sarin'i TGV?
misaotra betsaka @ sary sy VETO e :)
Nampidirin'i simp @ 19:27, 2007-12-08 [Valio]
toa tsy dia nisy sary firy ny an'i tgv zany sady toa tsy dia nisy kil...tssss...dommage...
Nampidirin'i Heri @ 20:15, 2007-12-08 [Valio]
Misaotra ra jentl a.
Tsy maty antoka ihany izany ny tim raha naka ny mediaconsulting hikarakara io tao Mahamasina io ko.
Azo eritreretina ihany koa anefa ny hoe akaiky mahamasina, ka raha hijery fety ihany dia aleo ao, @ izay tsy olana ny fodiana.
Nampidirin'i Kwasi @ 11:00, 2007-12-09 [Valio]
mankasitraka rajentl amin'ny toe-panahy : ity ny atsy atsimo ka ity koa ny avy atsy avaratra fa dia anjaran'ny tsirairay ny mitsara.
Nampidirin'i Rajiosy @ 11:13, 2007-12-09 [Valio]
mampiaky volana ahy ity resaka fizarana tee-shirt ity.
Tokony hovaina @ manaraka hoe tsy misy fizarazarana izany. Ary ny tena mpanohana akaiky no misalotra ilay tee-shirt
Nampidirin'i maintikely @ 12:43, 2007-12-09 [Valio]
merci jentilisa an!
tena en direct ny VETO e, milay mihitsy.
Fa rehefa vitsy² ny sary dia ataovy ngeza ihany fa tsy hita tsara tokoa nge e!
Nampidirin'i ikalakely @ 13:02, 2007-12-09 [Valio]
Aza fady fa somary niniako natao kely ilay izy sao misy gazety maka ny sariko eo nefa tsy naka alalana tamiko akory. Azonareo atao ny mangataka ny sary tianareo angezaina na Dia izany aza. Manaraka izany indray dia tamin'ny 10 sy sasany ka hatramin'ny 12 latsaka kely fotsiny no nakako ny sary tany amin'ny tgv. Tsy nisy fiovany loatra ny isan'ny niditra tao tamin'izany fotoana izany ka nihevitra aho hoe mety tsy hisy fiovany loatra intsony , kanjo hafa mihitsy rehefa mijery any amin'ny tele viva e!
Nampidirin'i jentilisa @ 13:22, 2007-12-09 [Valio]